Shiinaha Alaab-qeybiyeyaasha Boorsada - Jumlada & Iibso Qiime dhimista bacda duffle - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Bacda duffle
Duulimaadyada gudaha: Rakaabka heysta tikidhada heerka koowaad waxaa loo oggol yahay labo nooc oo boorsooyin qaadasho ah qofkiiba, rakaabka haysta fasalka ganacsiga iyo tikidhada heerka dhaqaalaha waxaa loo oggol yahay hal boorso oo lagu qaado qofkiiba. 20 × 40 × 55 cm Miisaanka guud ee labada shay ee kor ku xusan kama badnaan 5 kg. Duulimaad caalami ah: shandad kasta oo shandad ah kama badna 20 × 40 × 55 cm, wadarta miisaanka shandadaha gacantu kama badna 7 kg.
Bacda duffel ee ragga
Gargaarka: 2 3-mitir oo suumanka dhejiska dheer leh oo labalaab ah, 1 boorso gaar ah oo lagu keydiyo dharka Oxford
Kabo gooni ah iyo Waxyaabaha la masaxo: Bacdan jimicsiga oo leh qol kabo ayaa hawo kala soocaya si ay u kala soocaan kabaha iyo qalabka wasakhda ah ee ka soo baxa waxyaabaha nadiifka ah.Waxaa sidoo kale jira bac dheeraad ah oo aan biyuhu xirin oo lagu keydiyo waxyaabaha qoyan, gaar ahaan tuwaallada qoyan ama jeebadaha dharka lagu maydho, oo aad u habboon nadiif ah
Bacda duffle maqaar
Wanaagsan safarka: Waxaad u qaadan kartaa boorsadan meel kasta adigoon ka walwalayn inaad uga tagto booska boorsada.Waxay ku imaaneysaa suunka garbaha (oo leh garabka garbaha), oo gacantuna waxay leedahay barkimo jilicsan oo dusha sare ee boorsada ah si ay si fudud wax u qaaddo una qaado. Intaas waxaa sii dheer, dhinacyada yar yar ee gacan qabashada ah waxay bixiyaan taageero dheeri ah. Cabbirkani wuxuu ku habboon yahay diyaaradaha, safarka, iyo shandadaha. Iyadoo dhowr qaybood oo kala go'an ah, way fududahay in gudaha la galo si loo abaabulo ama looga soo qaado alaabooyinka la keydiyay, taasoo ka dhigaysa mid fudud in la isticmaalo leh qalabka safarka.